Marketing Pilgrim dia midika hoe Coopetition | Martech Zone
Marketing Pilgrim dia midika hoe Coopetition
Alatsinainy, Novambra 5, 2007 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Bilaogin'i Andy, Marketing Pilgrim, dia tokony hamaky fa efa nisoratra anarana efa ela aho. Tsaroako ny voalohany Nanondro ny bilaogiko i Andy - Tena mendri-piderana aho! Andy dia ohatra tsara iray amin'ny toerana itiavako ny bilaogiko sy ny orinasako hisy ao anatin'ny taona vitsivitsy.
Ny zavatra mahavariana momba ny fitorahana bilaogy dia ny mikasika manokana mikasika izany dia mamela fomba fijery tsy manam-paharoa. Ny fomba fijery tsy manam-paharoa tsirairay, na dia mifanipaka aza izy ireo, dia manome ny fifandanjan'ny fampahalalana ilainao handraisana fanapahan-kevitra sarobidy. Heveriko fa toy ny boaty crayons… mila loko vitsivitsy ianao raha tena te hamorona sary marina ianao. Mamaky Pilgrim Marketing aho satria tsy mitovy amin'ny ahy ny fomba fijerin'i Andy ary afaka mianatra zavatra betsaka amin'izany aho.
Mety hafahafa amin'ny olona sasany izany. Tsy tokony hifaninana ve isika? Tsy tokony hiezaka hangalatra mpamaky ve isika? Tsia tsia! Tsy toy ny media mahazatra izay manipy barbara tsy an-kijanona ny olona, ​​tokony hanana bilaogy izany ny liana am-po fa tsy antsika. Fantatsika fa, na dia midika ho fanodinana ny fifaninanana aza izany, dia manome ny mpamaky ny fampahalalana ilain'izy ireo hampitomboina. Tombany izany ary mangarahara, manangana fahatokisana fanampiny ary mametraka ny mpamaky ho lohalaharana.
Fehiny: Raha misoratra amin'ny bilaogiko ianao dia tokony hisoratra anarana amin'i Andy koa!
Fanamarihana: Ny fiaraha-miasa dia tsy tonga raha tsy misy fanentanana ara-bola. Manantena aho fa mandresy ny $ 500 izay Andy dia mamoaka any! 🙂
Tags: Analyticsmpanoratra atinyatiny novidianamividy atinyfitaovana
Hanatrika ny Fihaonambe TechPoint amin'ny zoma aho
PHP: Andro firy mandra-pahatongan'ny Krismasy?
5 Nov 2007 tamin'ny 3:24 PM
Nampahery ahy ity lahatsoratra bilaogy ity satria miasa amin'ny famoronana tranokala vaovao misy bilaogy aho. Natahotra kely aho ny amin'ny hanombohana noho ny fifaninanana, saingy namaky lahatsoratra maromaro aho, anisan'izany ny anao, izay nandrisika ahy hanomboka. Heveriko fa ampy ny toerana ho an'ireo tranonkala mifaninana, ary mila mifantoka amin'ny fanaovana izay tsara indrindra vitako ho an'ny mpamaky aho. Amin'izany fomba izany dia hahomby voajanahary ny bilaogiko satria ilaina sy sarobidy izy io.
5 Nov 2007 tamin'ny 8:27 PM
Misaotra Doug! Manaiky aho fa misy fitiavana be dia be hivezivezy!